e-Library | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
Tag Archives: e-Library
September 6, 2020 · 12:46 pm
Credit to ဓမ္မစာအုပ်များစုစည်းရာ Facebook
အောက်တွင် ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စာအုပ်များ ရယူနိုင်သော ၀က်ဆိုဒ် လိပ်စာ အချို့ ကို မျှဝေလိုက်ပါသည်။ အသုံး၀င်မည်ဟု မျှော်လင့်လျက်။
၁။ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ သုတ္တန်များ ဘာသာပြန်
Languages: English, Pali. Entries: ~1400 (Suttas: HTML); ~600 (Others: HTML); ~100 (PDF).
Languages: English. Entries: ~700 (PDF & HTML & ePub).
၃။ တိဗက်နှင့် ၀ဇိရယာန ဗုဒ္ဓဝါဒ ကျမ်းစာများ
Languages: English, Tibetan, German, Spanish, French. Entries: ~250 in English; ~700+ total (HTML).
၄။ ပါဠိ၊ တရုတ်၊ သက္ကတ၊ ဂန္ဓာရီ၊ ပြက္ကရိုက် ဘာသာများနှင့်ရှိသော သုတ်၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ္မာ ကျမ်းစာများကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသည်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန် အချို့ ပါ၀င်သည်။
Languages: English, Pali, Sanskrit, Chinese, Tibetan. Entries: ~Thousands (HTML).
၅။ ဗုဒ္ဓဝါဒ အဘိဓမ္မာကျမ်းစာများကို အဓိက ရယူနိုင်သည်။
Languages: English, Pali. Entries: ~100+ (PDF).
၆။ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန် အနည်းငယ် ခက်သည်။ သို့သော်စိတ်၀င်စားဖွယ် ဆရာတော်ကြီးများ၏ ကျမ်းစာများ
အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရယူနိုင်သည်။
Traditions: Theravada, Mahayana, Vajrayana, Zen. Languages: English. Entries: ~1000+ (PDF & HTML).
၇။ ဗုဒ္ဓဝါဒ ကျမ်းစာ အကြောင်းအရာ မျိုးစုံကို ရယူနိုင်သည်။
Traditions: Theravada, Mahayana, Vajrayana, Zen. Languages: English, Chinese, Thai, Spanish and Portuguese. Entries: ~350 in English; ~2000 total (PDF).
၈။ တိဗက် ဗုဒ္ဓဝါဒ ကျမ်းစာများ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် မူဖြစ်သည်။
Languages: English, Tibetan. Entries: ~150+ (PDF & HTML).
၉ ။ အိန္ဒိယ အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်ဖြစ်၍ စာအုပ်ပေါင်း ငါးသိန်းကျော်ရှိသည် ဟုဆိုသည်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရွေးချယ် ရှာဖွေနိုင်သည်။
Books: ~550,000 (PDF).
၁၀။ ထေရဝါဒ၊ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဝါဆိုင်ရာ ကျမ်းစာများ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်သည်။
၁၁။ မေ့လျော့နေသော ကျမ်းစာများ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် ၀က်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်း ရှားပါးကျမ်းစာပေါင်း ငါးသိန်းကျော်သည်။
၁၂။ ဗုဒ္ဓဝါဒ အပါအ၀င် ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ကျမ်းစာများကို ရယူနိုင်သည်။
၁၃။ စာအုပ်သာမက အခြား ပညာရေးဆိုင်ရာ အသံ၊ ရုပ်သံ ဖိုင်များလည်း ရယူနိုင်၍ စာအုပ်ပေါင်း ခြောက်သန်းကျော် ရှိနေသည်။ ရှာရတော့ ခက်နိုင်သည်။ ဥပမာ အောက်ပါ လင့် အတိုင်း သွားနိုင်သည်။
၁၄။ ရောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေ ရှိနေပေမဲ့ free ရယူနိုင်တဲ့ ကျမ်းစာ
များလည်း ရှိနေတဲ့ ဆိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ မြန်မာနိုင်ငံက နာမည်ကျော် ဆိုဒ် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့
dhammadownload ဆိုဒ် ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ဘာသာ
ဘာသာရေး ကျမ်းစာပေါင်း များစွာ ရယူနိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်
ဘာသာနဲ့ကျမ်းစာတွေ လည်း ရှိနေပါတယ်။
၁၆။ ကမ္ဘာအေး သာသနာ ရေးဦးစီးဌာန ဆိုဒ်ဖြစ်ပြီး
မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ကျမ်းစာပေါင်းများစွာ
ရှိနေပါတယ်။ ယခုတော့ English ဘာသာ index ကိုသာ
Filed under Buddhism, Download, e-Book, e-Library
Tagged as Buddhism, Download, e-Book, e-Library
March 15, 2018 · 5:53 pm
One of my bookshelf …
FREE Online & e-Book Link Collection
စာပန္းရဂံု CLICK HERE
ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္း ဝတၳဳရွည္ ၁၀၀ (နိုဘယ္လ္-ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္
ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္မႈ) ထဲက ဝတၳဳရွည္ အုပ္ ၆၀ CLICK HERE
200 IT and Computer Books (Myanmar) CLICK HERE
All Channel Myanmar<=>English Dictionary CLICK HERE
Ancient Buddhist Text (Original Texts and Studies) CLICK HERE
Ancient Buddhist Text (Texts and Translation) CLICK HERE
Ancient Buddhist Text (Texts in English Only) CLICK HERE
Ancient Buddhist Text (Indian Prosody) CLICK HERE
Ancient Buddhist Text CLICK HERE
Ancient Myanmar CLICK HERE
A Phyu Yaung Metta CICK HERE
An Arakanese from Myanmar CLICK HERE
APM Blog CLICK HERE
Ashin Kumara’s Collection – Myanmar CLICK HERE English CLICK HERE
Ashin Kelasa’s Collection – Main Site CLICK HERE Myanmar CLICK HERE English CLICK HERE Sacred Books of East CLICK HERE Palms CLICK HERE
Bamakyel (Myanmar Star) CLICK HERE
Book Hive CLICK HERE
Buddha Net’s eBook Library CLICK HERE
Burma Book Worm (Sarpay Yiek) CLICK HERE
Burma Boy CLICK HERE
Burma Centre for Ethnic Studies CLICK HERE
Burma Library CLICK HERE
Burmalay’s Book Download Guide CLICK HERE
Burmese Books CLICK HERE
Burmese Classic CLICK HERE
Burmese Dictionary Burmese<=>English CLICK HERE
Can’t Catch Group CLICK HERE
Cherry Thitsar CLICK HERE
Chan Lin Nay’s Dictionary and Encyclopedia Collection CLICK HERE
Chan Lin Nay Collection CLICK HERE
Dhamma Download (Buddhist Texts in Eng) CLICK HERE
Dhamma Download (Buddhist Texts in MM) CLICK HERE
Dhamma Web Book CLICK HERE Audio CLICK HERE
Dhammapada Pali-MM-Eng (Online) CLICK HERE
e-Book Collection (Scribd) CLICK HERE
Eainmathling CLICK HERE
EBooks Farm CLICK HERE
EBooks Sharing (on Facebook) by Rector U Kyi Shwin CLICK HERE
E Library CLICK HERE
Eng-MM Dictionary CLICK HERE
Free Book Store CLICK HERE
Free Myanmar Book Download (Facebook) CLICK HERE
Gigapedia CLICK HERE
Gigle CLICK HERE
Golden Myanmar e-Book CLICK HERE
International Development Research Centre (IDRC) Library CLICK HERE
IDRC Digital Library CLICK HERE
IM2 Friends CLICK HERE
Internet Archive CLICK HERE
IT e-Books CLICK HERE
IT Man A+ CLICK HERE
Law and Code by Myanmar Police Force CLICK HERE
LinktotheBooks (စာအုပ္လင့္ေပါင္းစံု Facebook) CLICK HERE
Mg Guru CLICK HERE
Martikar Kyan (Pikay) CLICK HERE
Min Thukha Political Book Collection CLICK HERE
MM IT Dictionary CLICK HERE
Moezatt Ko CLICK HERE
Moe Kaung Kin CLICK HERE
Myanmar Antonyms (ျမန္မာစာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေဝါဟာရမ်ား) CLICK HERE
Myanmar Book Download CLICK HERE
MyanmareBooks (Facebook) CLICK HERE
Myanmar Books Catalogue CLICK HERE
Myanmar e-Book CLICK HERE
Myanmar e-Books CLICK HERE
Myanmar E-Books Facebook CLICK HERE
Myanmar e-Books Free CLICK HERE
Myanmar e-Books Free – Facebook CLICK HERE
Myanmar ISP CLICK HERE
Myanmar Network News CLICK HERE
Myanmar Online Encyclopedia CLICK HERE
Myanmar Proverbs CLICK HERE
Myanmar Sar (Zaung’s collection) CLICK HERE
Myanmar Sar Spelling CLICK HERE
Myanmar Wikipedia CLICK HERE
Myat Moe CLICK HERE
M Share CLICK HERE
Myanmar Journals Download CLICK HERE
National Library, Myanmar CLICK HERE
Nay Myo’s Ma Win May CLICK HERE
NLD (LA) Korea Library CLICK HERE
Northern Illinois University Collection CLICK HERE
Nyi Lynn Seck’s Collection (1) CLICK HERE (2) CLICK HERE
Nyisay Myanmar Ebook Creator CLICK HERE
Old Journals CLICK HERE
Ornagai Myanmar<=>English Dictionary CLICK HERE
People Media Voice CLICK HERE
Phoo Nu Thit CLICK HERE
Pyinnya CLICK HERE
Research and Demonstration Dictionary CLICK HERE
Saing MM-Eng Dictionary CLICK HERE
Search Myanmar Collection CLICK HERE
Shwe Eaim Si CLICK HERE
Shwe Sagar CLICK HERE
Song Lyrics (Pikay) CLICK HERE
Southeast Asian Language (Burmese) MM-Eng Dictionary CLICK HERE
Student’s Eng-MM Dictionary CLICK HERE
Sutta Central (ပိဋကတ္ သံုးပံု၊ ပါဠိ၊ ဘာသာျပန္၊ အၿပိဳင္က်မ္းမ်ားကို ဘာသာ ၁၇ မ်ိဳးအထိ ဖတ္ႏိုင္သည္) CLICK HERE
Swan Bros CLICK HERE
Thitsar CLICK HERE
Thabarwa Centre (Dhamma Book – English and Myanmar) CLICK HERE
Tipitaka MM Translation (All Tri Pitaka Completed Translation Set) CLICK HERE
The Irrawaddy Weekly Journal (PDF) CLICK HERE
Tong Paw Thar CLICK HERE
University of Washington Collection CLICK HERE
Weenyinthit Bookshelf CLICK HERE
Weenyinthit Scribd CLICK HERE
Xmarks Link Collection CLICK HERE
Yar Zar Aung CLICK HERE
Zagawar Myae CLICK HERE
လင့္ခ္အသစ္ေတြကို ရွာေဖြၿပီး ထပ္ျဖည့္ေပးေနပါတယ္။ ဖြင့္လို႔မရေတာ့တဲ့ လင့္ခ္ေတြ ေတြ႔ရွိခဲ့ရင္ ေကာ္မန္႔မွာ အသိေပးခဲ့ပါခင္ဗ်ား။ အခု စုထားတဲ့အထဲမွာ မပါတဲ့ အီးဘုတ္ (လွ်ပ္စာအုပ္) လင့္ခ္ေတြရွိရင္လည္း ေကာ္မန္႔မွာ ခ်ေပးခဲ့ပါခင္ဗ်ား။
သင္ကာ @ ခက္ထန္
Filed under e-Book, e-Library
Tagged as e-Book, e-Library